kaabayaasha dhaqaalaha Archives - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Guddiga Dhaqaale Dhaqaale ee Beesha Washington ayaa afar degmo ku maalgeliyay $3.3 milyan
$2 milyan oo deeq ah oo loogu talagalay miyiga ballaaran ee Whatcom oo ka mid ah shan mashruuc oo loo ansixiyay maalgelinta kulanka CERB November. OLYMPIA, WA - Guddiga Dhaqaale Dhaqaale ee Bulshada Gobolka Washington (CERB) ayaa todobaadkii hore ansixiyay $2,431,250 deeqo ah iyo $843,750 oo ah deymo dulsaar hoose ah oo loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha, kaabayaasha dadweynaha, iyo horumarinta ballaaran. Mashruucyada maalgelinta la bixiyay waxay ku yaalaan Cowlitz, Grays Harbor, King, iyo Whatcom counties waxayna kicin doonaan kobaca ganacsiga, shaqo abuurka iyo xawaaraha sare.
Dayaxa Sinaanta Dijital ah: Gobolku wuxuu daahfurayaa Xafiiska Sinnaanta Dijital ah si uu u caawiyo dhammaan dadka deggan Washington inay ku barwaaqoobaan adduun isku xiran
Waxaad u badan tahay inaad tan ku akhrinayso aalad ku xiran internetka. Naftaada u arag mid nasiib leh maxaa yeelay 45% dadka deggan Washington midkoodna ma laha adeeg internet ah gurigooda ama wuxuu leeyahay wax ka yar 10 Megabits ilbidhiqsi (Mbps) xawaaraha soo dejinta. Xawaarahaas, waxaad ku eegi kartaa iimaylka oo aad baari kartaa dhowr goobood oo intarneedka ah, laakiin ma sii deyn kartid barnaamij TV ama filim, ka qaybgeli kartid wicitaan fiidyow, ama ma yeelan kartid kalsooni
Ganacsigu wuxuu $ 10.5 milyan ku abaalmariyaa mashaariic muhiim u ah kaabayaasha dhaqaalaha ee 25 bulshooyinka reer miyiga ah
Deeqaha Horumarinta Bulshada waxay gacan ka geysan doontaa maalgelinta mashaariicda maxalliga ah ee mudnaanta sare siinaya guud ahaan gobolka Washington ee OLYMPIA, Wash - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa ku dhawaaqday in 25 magaalo iyo degmooyin miyi ah ay heli doonaan wadar ahaan in ka badan $ 10.5 milyan oo ah Deeqaha Horumarinta Bulshada (CDBG) loogu talagalay 2019. Toddobaatan iyo labaatan mashruuc ayaa laga soo xulay 41 codsiyo deeq oo codsanaya in ka badan $ 20 milyan. Mashaariicda la siiyay maalgelinta waxay horumarin doonaan nidaamka biyaha iyo bulaacadaha, jidadka, bulshada
Ganacsiga ayaa abaalmarin ka badan $ 8.7 milyan si kor loogu qaado waxtarka tamarta iyo qorraxda ee dhismayaasha dadweynaha
Nidaamka tartanku wuxuu tilmaamayaa 39 mashruuc oo la soo jeediyey ee degmada dugsiga, tacliinta sare, tas-hiilaadka dawladaha hoose iyo gobolka oo yareynaya kharashka hawlgalka iyo qiiqa CO2. OLYMPIA, WA - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa maanta shaacisay $ 8.7 milyan oo deeq ah oo la siinayo dawladaha hoose, iskuulada iyo wakaaladaha gobolka ee loogu talagalay 39 mashruuc oo la soo jeediyay oo ka socda gobolka oo dhan kuwaas oo kordhin doona waxtarka tamarta iyo isticmaalka tamarta qoraxda iyo yaraynta qiiqa kaarboon-ka-dioxide (CO2). “Sababtoo ah
Snohomish PUD Breaks Ground on Microgrid iyo Xarunta Teknolojiyada Tamarta Nadiifka ah
Mashruucani wuxuu matalayaa tikniyoolajiyad cusub iyo qaab bixiya adkeysi shabakadeed iyo is-dhexgal tamarta la cusboonaysiin karo. Mashruucu wuxuu ka koobnaan doonaa 500-kilowatt oo qorraxda leh oo leh rogayaal caqli-gal ah, 1,000 kW / 1,000 kWh lithium-ion nidaamka keydinta batroolka iyo dhowr xarumood oo lagu xareeyo gawaarida-ilaa-shabakadda si loogu isticmaalo gawaarida korantada ee PUD. Deeqaha laga helo Barnaamijka Casriyeynta Qalabka Casriyeynta ee Washington Clean Energy Grid casriyeynta ayaa gacan ka gaysatay bixinta walxaha kaydinta tamarta ee u oggolaanaya kuwaan iyo kuwa kale ee xiisaha leh